डा. केसीका माग पूरा भइसके: प्रसाइँ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
डा. केसीका माग पूरा भइसके: प्रसाइँ
प्रकाशित मिति : २०७६, २६ कार्तिक मंगलवार १५:५९
काठमाडौं । विएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईँले डा. गोविन्द केसीका माग पूरा भइसकेकाले अनसनको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा प्रसाइँले सरकारले केसीका माग पूरा गरिसकेकाले केसीले अनसन बस्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘केसीको आन्दोलन एउटा डीन नियुक्तिबाट सुरु भयो, शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको माग गरे, त्यसमा हामी पनि लाग्यौं र त्यो गठन भयो । उहाँका सबै माग पूरा भएका छन् । अनि उहाँले उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुँदैन भन्नुभयो । दूरदराजमा जाऔं भन्नु भयो त्यसपछि गोविन्द केसी भन्दा एक सय गुणा अघि बढेर विएण्डसी कलेज खोलें तर मैले लाइसेन्स पाइन । यो मेरो पीडा कसले सुन्ने ?’
उनले सरकारले २०६८ सालमा मेडिकल कलेज खोल भनेर अनुमति दिएको तर आज २०७६ सालसम्म आउँदा लाइसेन्स नपाएको भन्दै गुनासो गरे । उनले भने, ‘मैले एक हजार जनालाई रोजगारी दिएको छु म चाहि माफिया रे कसरी म माफिया भएँ ? मैले मेडिकल कलेज खोल्न खोज्दा र क्यान्सर अस्पताल खोल्नु अपराध हो ? तपाइँहरुले नै भनिदिनुस् ।’
उनले डा केसीका माग पूरा भइसकेकाले अब राखेका माग जायज नभएको बताए । उनले जहिले पनि गोविन्द केसीमा माग पूरा गर्नुपर्यो भनेर हिंड्नु आवश्यक नरहेको बताए । उनले गोविन्द केसीलाई अनसनमा राखेर को को मानिस अघि बढे? त्यो घाम जतिके छर्लंग भएको बताए ।
गोविन्द केसीको माग काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेको होइन ? तर मैले सुदूरपूर्वमा गएर मेडिकल कलेज खोलेको छु ,मैले किन अनुमति नपाउने त ? सबैभन्दा अन्याय र अत्याचारमा परेको व्यक्ति आफू भएको भन्दै आफूलाई माफिया नभन्न आग्रह गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गएको भन्दै देशभित्र मेडिकल कलेज खोल्ने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा त्यसो नभई विरोध हुनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले डा केसी अनसन बसेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई काम गर्न नदिएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छः मुक्ति प्रधान
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट १३ जनाको मृत्यु, ५०१ जना संक्रमणमुक्त
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्ने भएका छन् ।